Shariif Xasan Sheekh Aadan oo markii ugu horeeysay codsi layaab leh u diray madaxweyne Xasan Sheekh – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo markii ugu horeeysay codsi layaab leh u diray madaxweyne Xasan Sheekh
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa codsi layaab leh u diray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoona ka dalbaday inuu dalacsiiyo saraakiisha ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaas oo dagaal kula jira kooxda Al-shabaab.
Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa dalabkiisa kusoo beegay xilli doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay soo dhawaatay, isagoona dhinaca kale tilmaamay in ciidankaasi ay wax badan u qabteen bulshada ku nool deegaanada maamulka Koonfur Galbeed , islamarkaana ay u shaqeeyeen si howl-karnimo ku jirto.
Sidoo kale, madaxweyne Shariif Xasan ayaa sheegay in ciidamadaasi ay dagaal culus kula jiraan Xarakada Al-shabaab ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed islamarkaana ay mudan yihiin in dalacsiin loo sameeyo.
“Waxaan rajeynayaa dowladda Soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ugu horeeyo inuu dalacsiiyo ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee cadowga la dagaalamay, waxaana ka codsaneynaa inuu dalacsiiyo ciidamada sida gaar ah kaga shaqeeyay amniga doorashooyinka” Sidaasi waxaa yiri madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Dhinaca kale, madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka codsaday midowga Afrika inay sidoo kale dalacsiiyaan saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugan Somaliya, kuwaas oo uu ku tilmaamay ina kaalin mug leh ka qaateen suggida ammaanka dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa socdaal uu dhawaan ku tagay magaalada Baydhaba lagu qasbay inuu dalacsiiyo in ku dhow 200 ciidan iyo saraakiil isugu jira, iyadoo uu ogolaaday xilli dhaqan gashay wareegto uu hore u soo saaray oo ku saabsaneyd inaan dalacsiin iyo shaqo ka qaadis la sameyn karin xilliga kala guurka ah.
Si kastaba, hadalkaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hore dalacsiin ugu sameeyey boqolaal saraakiil ah oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, taas oo lagu tilmaamo inay tahay midii ugu badnayd uu sameeyo madaxweyne Soomaaliyeed.